တစ်လမှ တစ်ညပဲ ရွတ်ရမယ့် ငွေပြည့်ငွေလျှံဂါထာ - MM Live News
ခုေဖာ္ျပမဲ့ ဂါထာေလးကေတာ့ ေငြဝင္ေငြျပည့္ ခ်မ္းသာေစတဲ့ ေငြဝင္ဂါထာေလးပါပဲ…. တစ္လလုံးမွာမွ တစ္ညပဲ ႐ြတ္ဆိုရတာပါ…..လတစ္လရဲ႕ လျပည့္ညေရာက္တိုင္း ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေငြဝင္ဂါထာေလးကို ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးပါ…..ပရိသတ္ႀကီးတို႔အတြက္ တကယ့္ကို ေငြဝင္ေငြလွ်ံေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္…
ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း..ျမတ္စြာဘုရား သာဝတၳိျပည္ ပုပၸာ႐ုံေက်ာင္း မိဂါရမာတုျပႆ ဒ္၌ သီတင္းသုံးေတာ္မူစဥ္ အရွင္အာနႏၵာ၏ ေလွ်ာက္ထားမူကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘုရားရွင္က ဤဂါထာကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္ ။အရွင္အာနႏၵာသည္ သီတင္းကြၽတ္ လျပည့္ေန႔ဆည္းဆာအခ်ိန္တြင္ အေနာက္ေဂါယာကြၽန္း ယြန္းမည့္ဆဲဆဲ ေနအေရာင္၏ တင့္တယ္မႈ အေရွ႕ေလာကဓာတ္မွ ထြက္ျပဴစ လမင္း၏ တင့္တယ္မႈတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ ႏွစ္သက္ ပီတိ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ ။
ထိုသို႔ အာ႐ုံခံစားမူ ျဖစ္ေနစဥ္၌ စစ္အဂၤါေလးပါး ၿခံရံကာ မင္းေျမႇာက္တန္ဆာ ဝတ္ဆင္လာၿပီး ပန္းနံ႔သာစြဲကိုင္လွ်က္ ဘုရားရွင္ထံ ေရွးရႈ႕လာေနေသာ ပေသနဒီေကာသလ မင္းႀကီး၏ တင့္တယ္မႈကို ျမင္ရ၍လည္း ႏွစ္သက္ပီတိျဖစ္ရျပန္သည္ ။
ဂါထာတွေ မန္တန်တွေဆိုတာ ဟိုးရှေးခေတ်အခါတည်းက ရှိခဲ့တာပါ….တကယ့်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ ဂါထာတွေကြောင့် ကောင်းကျိုးတွေရရှိခဲ့တာတွေရှိသလို ထူးခြားမှုတွေ ကြုံရတာလည်း ရှိပါတယ်…မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း ကုသိုလ်ကံကကောင်း ယုံကြည်စွာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့ ဂါထာကလည်း အစွမ်းထက်ဆို မိမိအတွက် အလွန့်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေတာပါ…
ခုဖော်ပြမဲ့ ဂါထာလေးကတော့ ငွေဝင်ငွေပြည့် ချမ်းသာစေတဲ့ ငွေဝင်ဂါထာလေးပါပဲ…. တစ်လလုံးမှာမှ တစ်ညပဲ ရွတ်ဆိုရတာပါ…..လတစ်လရဲ့ လပြည့်ညရောက်တိုင်း အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ငွေဝင်ဂါထာလေးကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါ…..ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် တကယ့်ကို ငွေဝင်ငွေလျှံစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
(၁) ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ္စော ၊ ရတ္တိမာ ဘာတိ စန္ဒိမာ။ သန္နဒ္ဓေါ ခတ္တိယော တပတိ ဈာယီ တပတိ ဗြဟ္မဏော။ အထ သဗ္ဗ မဟောရတ္တိ ံဗုဒ္ဓေါ တပတိ တေဇသာ..
ဂါထာတော် မြန်မာပြန် အနက်..(၁) နေမင်းသည် နေ့အခါ၌သာ တောက်ပ၏။ လမင်းသည် ညဉ့်အခါ၌သာ တောက်ပ၏။ ရှင်ဘုရင်သည် မင်းမြှောက်တန်ဆာငါးပါး ဆင်ယင်ထားမှသာ တောက်ပ၏..။ရဟန္တာသည် ဈာန်ဝင်စားနေမှသာ တောက်ပ၏ ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ကား နေ့ရောညပါ အခါခပ်သိမ်း တန်ခိုးတော် အမျိုးမျိုးဖြင့် အချိန်တိုင်း တောက်ပ၏..။(၂) ထိုသို့နေရော ညဉ့်ပါ ဘယ်ခါမလပ် တန်ခိုးရှိန်စော်အာနုဘော်တော်တို့ဖြင့်ထွန်းလင်းတောက်ပတော်မူသောဘုရားရှင်အား ဘုရားတပည့်တော်သည် ရိုသေမြတ်နိုးလက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏ မြတ်စွာဘုရား..ဤသိုရှိခိုးပူဇော်ရသော အကျိုးအားကြောင့် အလုံးစုံကုန်သော လောကီစီးပွါး အထွေထွေစည်းစိမ် ဥစ္စာရတနာ အထွေတို့နှင့် လျင်လျင်မြန်မြန် ပြည့်စုံနိုင်ရပါစေသား အရှင်မြတ်ဘုရား..ရွတ်ဆိုလိုပြီး ပါဠိအသံကို ပီပြင်အောင် မရွတ်ဖတ်တတ်သော သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည် ဖတ်တတ်သူများက ကျော်သွားပေးပါ..။
မြန်မာအသံထွက်..(၁) ဒိဝါ တပတိ အာဒိတ်စော ရတ်တိမာ ဘာတိ စန်ဒိမာ သန်နတ်ဒေါ ခတ်တိယော တပတိ ဈာယီ တပတိ ဗြင်မဏော အထ သပ်ဗ မဟော ရတ်တိန်ဗုဒ်ဓေါ တပတိ တေဇသာ..(၂) တာဒိသံ တေဇသံပန်နံ ဗုတ်ဓံ ဝန်ဒါမိ အာဒရံ နမက်ကာရာ နုဘာဝေန သပ်ဗေ ပူရင်တု သင်ကပ်ပါ..။(ရကောက် အသံရွတ်လျှင် အင်္ဂလိပ်အသံထွက် R လို လျှာလိပ်သံဖြင့် ထွက်ပါ။ ယပလက်အသံ ယတ်ဟု မထွက်ပဲ ရတ် ဟု ပီပြင်အောင် ထွက်နိုင်ရန်က ကြိုးစားပါ..။ယံ အသံ မထွက်ပဲ ရံ ဟု ပီးပြင်အောင် ကြိုးစားပါလေ)
ဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူခြင်း..မြတ်စွာဘုရား သာဝတ္ထိပြည် ပုပ္ပာရုံကျောင်း မိဂါရမာတုပြဿ ဒ်၌ သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် အရှင်အာနန္ဒာ၏ လျှောက်ထားမူကို အကြောင်းပြု၍ ဘုရားရှင်က ဤဂါထာကို ဟောကြားတော်မူပါသည် ။အရှင်အာနန္ဒာသည် သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ဆည်းဆာအချိန်တွင် အနောက်ဂေါယာကျွန်း ယွန်းမည့်ဆဲဆဲ နေအရောင်၏ တင့်တယ်မှု အရှေ့လောကဓာတ်မှ ထွက်ပြူစ လမင်း၏ တင့်တယ်မှုတို့ကို တွေ့မြင် နှစ်သက် ပီတိ ဖြစ်တော်မူသည် ။
ထို့ပြင် အရှင်အာနန္ဒာသည် ကာဠုဒါယီ ရဟန္တာမထေရ် ဈာန်ဝင်စားသဖြင့် ကိုယ်တော်မှ အရောင်အဆင်းများ တောက်ပထွန်းပေါ်နေသည်ကို မြင်ရသဖြင့် နှစ်သက်ပီတိ ဖြစ်တော်မူပြန်လေသည် ။ထို့နောက် ဘုရားရှင်၏ အရောင်အဆင်းထွန်းလင်းတောက်ပခြင်းမှာ အထက်ပါနေမင်း’ လမင်း’ ရှင်ဘုရင်’ ရဟန္တာ’တို့ထက် သာလွန် လွှမ်းမိုး ထူးကဲကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် ဘုရားရှင်အား လျှောက်ထားရာ ဘုရားရှင်က ဒိဝါတပတိ အစချီသော ဤဂါထာတော်ကို ဟောကြား တော်မူလေသည် ။
ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် အကျိုးရှိစေမဲ့ ဂါထာလေးမို့ ခုလို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်…အားလုံးချမ်းသာကြပါစေ…
Writer – HW (Shwe Yaung Lan)Source : Danma (ဓမ္မပဒ)
မုဒုံမြို့တွင် ကားနှစ်စီးတိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး ၂၀ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရရှိ
ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ပညာေတြကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေလ့လာသင္ၾကားေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္း
January 7, 2019 MM Live News
April 16, 2019 MM Live News
စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ ႏွင့္ ေ၀ဘူဆရာေတာ္ အရိယာ ဆရာေတာ္ၾကီး ၂ ပါးေတြ႔ဆံုခန္း
October 13, 2018 MM Live